Wararka Dibadda – Page 4 – Shabakadda Amiirnuur
Tirada Dadka Shiinaha Ugu DHintay Carono Virus oo Sii Korortay.
Gudiga caafimaadka ee dalka Shiinaha, ayaa sheegay in ay diwaan galisay 56 qof oo cusub oo laga helay fayruska Axadii shalay, taas oo tirada dhimashada ka dhigeysa 361 xaaladood, halka tirada dadka cudurka uu soo ritay ay gaarayaan 17,205 qof. Magaalada Shiinaha ee Wenzhou, waxay soo rogtay xayiraad dhaqdhaqaaqa dadka […]
Fayruska Coruna oo Dhaawac Weyn Gaarsiiyay Dhaqaalaha Shiinaha.
Coronavirus-ka cusub, ee ku faafay Shiinaha, wuxuu saamayn daran ku yeeshay waaxyaha qaarkood sida dalxiiska, ganacsiga iyo gaadiidka. In kasta oo ay goor hore tahay in la go’aamiyo saameynta dhaqaale ee cudurka faafa, haddana waaxyaha qaarkood waxay sheegeen inuu si adag u saameeyay taasna ay hoos usii dhigeyso dhaqaalaha dalka. […]
Mareykanka oo Sheegay In Duqeyntii Iiraan Ee Ciraaq Ay Uga Waasheen Askar.
War kasoo baxay aqalka looga taliyo Mareykanka ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in 34 ka tirsan ciidamada Mareykanka laga helay dhaawac maskaxda kadib weerar gantaal oo ay Iran ku qaaday saldhigga Caynul asad ee Ciraaq horaantii bishaan. Fiidnimadii 7-dii Janaayo, ayay ahayd markii uu dhacay weerarkii lagu qaaday saldhigyada Mareykanka goortaasoo […]
Suudaan: Weerar Ay 7 Ku Dhinteen 70 Kalena Ku Dhaawacmeen oo Lagu Qaaday Xaflad Aroos.
Wararka naga soo gaaraya dalka Suudaan ayaa waxay sheegayaan in qarax lagu weeraray xaflad aroos oo ka dhacaysay bariga caasimadda wadanka Suudaan ee Khartuum. Qaraxan ayaa waxa uu sababay dhimashada 7 qof, 70 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii bam lagu qarxiyay goob aroos oo ku taalla aagga “Shaqla”, […]
Yahuuda oo jirdil xoog leh U Geysatay Maxbuus Falastiini ah. (Warbixin)
Qisada dhacdo xanuun badan oo ay Yahuudu kula kaceen maxbuus Muslim, Falastiini ah, ayaa muujineysa iyagoo garaacaya, timaha iyo garka ka jiiradaha oo faraha ka garaacaya una geysanaya dhibaatooyin kale, waxaana muuqaalo arrintan ka marqaati kacaya laga helay qoyskii maxbuuska. Maxbuuska oo lagu magacaabo Walid Xanaatisha ayaa waxaa lagu jir […]
Colaadaha Itoobiya oo Keenay In 35,000 Arday Ah Ay Isaga Tagaan Jaamacadaha & Israel oo Mamnuucday Safaradeedii Dalkaas. (Warbixin)
Wasaaradda Sayniska iyo Tacliinta Sare ee Itoobiya ayaa Jimcihii lasoo dhaafay xaqiijisay in rabshadaha ka jira 22 jaamacadood oo ku yaal dalkaas ay sababeen iney waxbarashada isaga tagaan 35,000 oo arday ah. Wasaaradda ayaa sheegtay inay qaaday tallaabooyin ay ugu yeertay kuwa edbin ah kana dhan ah boqollaal kulliyadood iyo […]
Dibad Baxyo Ka Dhan Ah Trump oo Ka Socda Mareykanka Xilli Uu Jiro Qabow Daran.
Kumanaan haween ah ayaa ka qeyb qaatay isu soo bax looga soo horjeedo Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyagoo sheegay iney sii wadayaan mucaaradidooda ka dhanka ah maamulka xukuumadda Washinton. Kaqeybgalayaashii dibad baxa ayaa muujinaya cabsi ay ka qabaan inuu mar kale Tramp ku guuleysto madaxtinimada dalkaas marka la gaaro Novemberta […]
In kabadan 2,500 oo maxaabiis ah oo lagu xiray howlgalka ka socda dalka Suudaan muddo sannad gudii ah.
Suudaan waxay goob joog ka ahayd ololihii ugu ballaarnaa ee qabqabashada ee waddanku caanka ku noqday muddo 3 sano ah, iyadoo 2 500 oo reer Suudaan ah la xiray intii u dhaxeysay 13-kii Diseembar, 2018, oo ah taariikhda ay dheceen dibadbaxyadii ugu horreeyay ee ka dhashay kacdoonkii Suudaan, iyo Abriil […]
Mareykanku Illaa Intee Buu Sii Wadi Doonaa Taarikhda “is weyneysiinta” Iyo Dagaalka Dhaqaalaha?.
Mareykanka waxaa waligii caado u ahayd inuu wax boobo islamarkaana uu cuna qabatayn dhaqaale kusoo rogo cid walba oo uu u arko inuu baadi karo, laga soo bilaabo xilligii dowladdaasi la aasaasay goortaasoo uu Madaxweyne Thomas Jefferson uu mamnuucay in ganacsi lala sameeyo Britain iyo France, taasoo keentay in badmaaxiinta […]
Falanqeeyayaasha dhaqaalaha ee wadanka Ruushka ayaa waxay ka faalloonayaan sidii dalkaasi looga yareyn lahaa isticmaalka lacagta Doolarka Mareykanka. Warbixin ay daabacday mareegta “News. Rey” ee ruushka, wuxuu sheegay in khubaradu ay sheeganayaan in natiijada ugu weyn ee sanadkan ee dhaqaalaha Ruushka ay tahay koritaanka gaabiska ah. Tani badanaa waxay u […]